Soo dejisan RogueKiller 11.0.8 – Vessoft
Soo dejisan RogueKiller
RogueKiller – software ah in la ogaado oo meesha laga saaro hanjabaad kala duwan. Software waxuu si aad u nadiifiso nidaamka aad ka furin, fayrusyada, kolkaasaa dirxi galay, Trojans oo hanjabaad kale. RogueKiller baaritaanku geedi socodka, entries diiwaanka, fayl oo kuu ogolaanaya in aad si meesha looga saaro ama inay soo sheegaan handidaad ka. Software ayaa lagu ogaadaa ka beddelka nidaamka darawallada ama dll-maktabadaha, kabanayso ciidammadu file, DNS, wakiil in la beddelay, by furin kala duwan. RogueKiller leeyahay interface ah dareen leh oo si sahlan loo isticmaali.
Ogaanshaha iyo ka saareen hanjabaado kala duwan
Skaanka ee geedi socodka, entries diiwaanka iyo fayl
Soo celisay file ciidammadu
Comments on RogueKiller:
RogueKiller Software la xiriira:
العربية, English, Français, Español... Avast 12.3.3154 Free Antivirus iyo Premier; 12.1.3076 beta Internet Security...
English, Français, Español, Deutsch... Kaspersky 2016 16.0.0.614 Internet_multi_device, Total_security, Antivirus...
العربية, English, Français, Español... 360 Total Security 8.8.0.1083
English, Español, Deutsch, 中文... Panda Antivirus 2015 15.0.1 Gold, Global, Internet iyo Pro
Antiviruses qalab The functional in la ogaado oo ka saar fayraska. software The hortagaa hanjabaado kala duwan oo kuu ogolaanaya in aad xaddido helitaanka ah u websites dadka waaweyn.
العربية, English, Français, Español... Baidu PC Faster 5.1.3.131061
العربية, English, Español, Português... Dr.Web 11.0.0.11162
Qaar kale waxay software The si ay ula socdaan falalka shaqaalaha at computer ah inta lagu jiro xilliga shaqada. software soo bandhigayaa statistics culayska iyo wax soo saarka shaqaalaha.
Tafatirka Text software The loo qoro buugaagta, maqaallada iyo buugaagta cilmiga ah oo ku saabsan cilmiga saxda ah content ee kaas oo ku jira xisaabaadka adag.